Foko sy Fiaviana · Desambra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Foko sy Fiaviana · Desambra, 2018
Tantara mikasika ny Foko sy Fiaviana tamin'ny Desambra, 2018
Shina 30 Desambra 2018
Fivondronan'ny bilaogera miteny Espaniola
(Marihina fa tamin'ny volana Oktobra 2006 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Natombok'i Carmen ity tetikasa vaovao iray ity, Espaniôla iray manana fahalianana manokana amin'ny fampiroboroboana ny fanoratana bilaogy amin'ny teny Espaniôla. Nanomboka nanangona bilaogy vitsivitsy izay nanintona ny sainy izy ary efa nihoatra ny zato ny lisitra tamin'ny fotoana nanoratana....
Shina 22 Desambra 2018
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 21 Desambra 2018
Libya: “Mirehitra i Gaza!” firaisankinan'ny bilaogera amin'i Palestina
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 15 Desambra 2018
Fozia Mohamed manomboka manavatsava ny tontolom-bilaogy Libyana sy ny fihetsiny manoloana ny tati-baovao amin'ny fanafihana Isiraeliana tao amin'ny tetezantanin'i Gaza, ankoatra ny fizarana ireo fahatafintohinana sy firaisankina ataon'ny bilaogera libyana amin'ny vahoaka Palestiniana. (desambra 2008)
Nandrehitra ny fifandirana ara-poko tao Afghanistana ny vaovao faikany sy ny fanodikodinam-baovao
Azia Afovoany sy Kaokazy 15 Desambra 2018
"Faikany ity sary nivezivezy ity raha ny marina. An'i Wakil Kohsar ny sary ary nalaina tamin'ny taona 2016, 2 taona lasa izay."
Kosovo 14 Desambra 2018
Tamin'ny 17 febroary 2008, nanambara ny fahaleovantenany i Kosovo. Hatreto, 43 tamin'ireo mpikambana miisa 192 ao amin'ny Firenena Mikambana no nanaiky [teny anglisy] an'io fahaleovantena io, izay i Etazonia, i Kanadà, i Aostralia, ary ny ankamaroan'ireo fanjakana ao amin'ny Firaisambe Eoropeana. Ny Fanjakana tena mandà mafy an'io fahaleovantena io, eo ankilan'i Serbia, dia i Rosia.
Noho ny fahataperan'ny vanim-potoanan'ny fety ao amin'ny tontolon'ny Arabo, nanapa-kevitra ilay bilaogera Ejypsiana Kareem Amer fa hiova kely - nahatonga ny sasany amin'ireo mpamaky azy ho faly ary ny hafa tsy faly!